निर्वाचन भनेको प्रतिनिधि छान्ने कला हो | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / निर्वाचन भनेको प्रतिनिधि छान्ने कला हो
निर्वाचन भनेको प्रतिनिधि छान्ने कला हो
Posted by: युगबोध in विचार December 4, 2017	0 84 Views
हामी आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदे शसभाको निर्वाचनको संघारमा छौ ं । दे श निर्वाचनमय भएको छ । पहिलो चरणको निर्वाचन मंसिर १० गते हिमाली र के ही पहाडी जिल्ला गरी ३२ जिल्लामा सम्पन्न भइसके को छ । त्यहा“का मतदाताहरु परिणामको प्रतीक्षामा छन् । तराई र पहाडका गरी ४५ जिल्लामा मंसिर २१ गते निर्वाचन हु“दै छ । हामी ४५ जिल्लाभित्र छौ ं । उम्मे दवारहरु मतदाताका घर–घरमा, टो ल चो क र सभामा मत माग्न व्यस् त छन् । सबै ले सपना दे खिरहे का छन् दे खाइरहे का छन् । सपनै नदे ख्ने ले दुनिया“मा के नै गर्न सक्छ र ? सपना नै जीवनको लक्ष त हो नि । तर पनि के ही ने ताहरु आज पनि आफ्ना कुराभन्दा अर्काको कुरा काटे र अभद्र शै लीको भाषण ठो के र भ्रम र अफवाहपूर्ण प्रचारवाजी गरे र हि“डिरहे का छन् । तिनै ने ताहरु जो आजभन्दा २६ वर्ष पहिले बूढाबूढीलाई ६० वर्ष पुगे पछि मार्छन्, के टाके टी लगिदिन्छन् ड“ुरमा हाले को भात खुवाउ“छन् भन्ने झूटो प्रचार गथेर्  ।
निर्वाचन प्रतिनिधि छनो ट गनेर् कला हो  । उम्मे दवारहरु भो ट तान्ने कला दे खाउ“छन् जादू दे खाउ“छन् भ्रम छर्छन् । मतदान नागरिकहरुले उम्मे दवारहरुलाई दिने विश्वास हो  । यसै ले मतको दान मतदान । जुन विषय वा वस् तु दिएर फे रि फिर्ता हु“दै न त्यो दान हो  । दान दुरुपयो ग नगरे र असल काममा प्रयो ग हुनुपर्छ । दाताको मनसाय यही नै हुनुपर्छ । हामी मतदाता हौ ं । मतदान व्यक्ति छनो ट गनेर् माध्यम हो  । यही नै निर्वाचन हो  ।
निर्वाचनलाई आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने माध्यम बनाइरहे का हामी मतदाताले यसका लागि विवे क प्रयो ग गर्नु जरुरी छ । मतदाता कुनै पार्टी वा चिन्हका दास हो इनन् । उनी विचारमा स् वतन्त्र र निर्वाचनका सवालमा सार्वभौ म छन् । सार्वभौ म जनताले दे शको सार्वभौ मिकता जो गाउनु जरुरी हुन्छ । दे शको अखण्डतामा कही कतै आ“च नआओ स् भने र चनाखो हुनुपर्छ । हिजो का दिनमा राष्ट्रियताको सवालमा, जनताको सवालमा को कति पहरे दार बन्यो त्यो हे र्न सक्नुपर्छ । गणतन्त्रमा विचारगत पार्टी हुन्छन् । छान्ने पार्टीलाई हो  । व्यक्ति त त्यसका प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् ।
आवधिक निर्वाचनको यो चुनाव यो भन्दा पहिले को आमनिर्वाचनभन्दा धे रै भिन्न छ फरक छ । यो निर्वाचन सत्तरी वर्षदे खिको ने पाली जनताको आकांक्षाको चुनाव हो  । हामीले भर्खरै संविधानसभाबाट संविधान पाएका छौ ं । त्यही संविधानबाट प्राप्त गरे का अधिकारलाई व्यावहारिकरुपमा लागु गर्न पाउने निर्वाचनका रुपमा यो निर्वाचनलाई पाएका छौ ं । यसै ले पनि यो निर्वाचन ऐ तिहासिक छ । नया“ ने पाल निर्माण गनेर् महत्वको विषय छ ।
दे श एकात्मक शासनबाट संघीयताको दिशामा मो डिएको छ । संस् थागतरुपमा गणतन्त्रको स् थापना भएको छ । ने पालीहरु प्रजाबाट जनता बने का छन् । राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भएको छ । अब मुलुकलाई कस् तो बनाउने ? कहा“ पु¥याउने ? कसस“ग दा“जिन सक्ने बनाउने अथवा अझ उन्नत बनाउने ? यसको निर्णय जनता आफै ले गर्न पाउने ठाउ“मा आइपुगे का छौ ं ।
हामीस“गै हामी जस्ता भएका दे शहरु विकासको गतिमा कहा“ पुगिसके , हामी कहा“ छौ ं, सर्वप्रथम हामीले यो हे क्का राख्नु जरुरी छ । सात सालमा जनता भएका हामी आठ वर्षको संक्रमण र डे ढ वर्षको दुई तिहाई प्राप्त चुनावी सरकारको अहंकारिताले २०१७ लाई पछ्याउ“दै ३० वर्ष हामीलाई प्रजामा झारे को इतिहास हामीस“ग छ । छयालीसको जनसंघर्षले ५० र ५० बनाउ“दै को रे को राजनीतिक इतिहासभित्र अहंकारिता र अस् िथरताबाट उत्पन्न विद्रुप इतिहास हामीस“गै छ । सत्र हजार भाइ छो राछो रीले ज्यान गुमाउनु परे को इतिहास पनि डा“डा पखे रा र समतल भूमिमा जीवन्त छ र त्यसको छर्रा यो चुनावमा पनि दे खिदै छन् । जसका कारण आज पनि ने पाल अ“ध्यारो छ । विकास अठारौ ं शताब्दीको छ । स् वास् थ्य जीर्ण छ । उत्पादनमा ह्रास छ । परनिर्भरता बढे को बढ्यै छ । शिक्षाले मुलुकलाई उठाउनै नसक्ने भएको छ । मूल्य मान्यता र नै तिकतामा आगो लागे को छ । दे श भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबे को छ र त अठार सय मिटर (१.८ किलो मिटर) बाटो को विस् तार चार वर्षमा पनि पूरा हु“दै न । खो लामा पुल भने र ठडिन थाले का पिलरहरुले यात्री र यातायातका साधनलाई गिज्याइरहे का छन् । प्राकृतिक पाउडरको उपहार दिएर खो ला र बाटाहरु हा“सिरहे का छन् ।
मंसिर २१ मा हामीले गनेर् मतदान इतिहास रच्ने मतदान हो  । प्रदे शको राजधानी तो क्ने , निर्माण गनेर् र विकासको पूर्वाधार खडा गनेर् मतदान हो  । मुलुकलाई समृद्धिको बाटो मा हि“डाउने यो महाअभियानलाई हामीले चानचुने चुनाव नसम्झौ ं । हाम्रो सानो गल्तीले दे शले हार्नसक्छ । अहिले यो चुनावी अभियानका माझ दुईथरी वाद दे खापरे का छन् । एउटा नवउदारवादी अर्थात दलाल पू“जीवादी अर्थतन्त्रको पक्षपो षण गनेर् ने पाली कांगे ्रसको यथास् िथतिवाद दे खिएको छ भने अकोर् समाजवादी अर्थतन्त्रको पक्षपो षण गनेर् वाम गठबन्धन दे खिएको छ । ने पाली कांगे ्रसले पुनरुत्थानवादी राजा फर्काउने र दे शलाई धार्मिक दे श बनाउने आकांक्षा राख्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई धारलाई काखा हाले को छ । त्यसस“गै कुहिरो को काग बने को बाबुराम भट्टराईको नया“ शक्ति पार्टी छ । छायामा ने पाललाई आत्मनिर्णयसहितको बहुराष्ट्रको संघ बनाउन आकांक्षी संसफो र राजपा छन् । वाम गठबन्धन गरिरहे का दलहरुमा एमाले र माओ वादी के न्द्र धुरीमा छन् र छे उछाउमा अन्य वामघटक छन् जो निर्वाचनपछि एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने प्रतिबद्धतामा छन् । यी दुबै बीच मुलुकभित्र यो निर्वाचनमा प्रतिस् पर्धा भइरहे को छ । दे शीविदे शी प्रतिक्रियावादीहरु सके चुनाव जित्ने नसके तराईलाई ताइवान बनाउने मा संलग्न छन् । अन्यथा एकल राष्ट्रियतामाथि आत्मनिर्णयसहितको बहुराष्ट्रियता किन खो ज्थे र किन पक्षपो षण गथेर्  ?
सबभन्दा पहिले जान्न जरुरी कुरा यो छ । कम्युनिष्टहरु राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भइसके पछि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्न चाहन्छन् । राष्ट्रिय पू“जीपतिहरुको संरक्षण गदैर् उनीहरुको धन राष्ट्रको विकासमा खर्च हो स् भन्ने चाहन्छन् । जसका माध्यमबाट दे शलाई समाजवादका चरणमा प्रवे श गराउन चाहन्छन् । उत्पादन उत्पादकत्व र वितरणलाई समन्यायिक बनाउन चाहन्छन् । जो गरिब र धनीबीचको खाडल पुनेर् प्रकृतिको हुन्छ । काममा जनताको समान पह“ुच छ । शिक्षा स् वास् थ्य र रो जगारीको ग्यारे न्टी हुन्छ । शिक्षालाई प्रविधि र ज्ञानस“ग जो ड्न चाहन्छन् । पू“जीवादभित्र उत्पादन उत्पादकत्व र वितरणमा समन्यायिक सम्बन्ध हु“दै न । त्यो शो षण र शो षित सम्बन्धमा हुकेर् को हुन्छ । पू“जीवादभित्र उत्पादन र उत्पादकत्वका बीचमा अकोर् विचौ लिया हुन्छ । उसको काम उत्पादन गनेर् स“ग सके सम्म कम मूल्यमा लिनु र उपभो क्तालाई जतिसक्यो महंगो मा दिनु हुन्छ । ऊ कमिसन दिन्छ कमिसन लिन्छ । कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्छ मूल्यवृद्धि गर्छ । यो पद्धतिलाई पू“जीवादभित्रको दलाल पू“जीपति पद्धति भन्छन् । आज हाम्रो समाजमा उपभो क्ताले जुन मार खपिरहे का छन् त्यो दलाल पू“जीवादीको परिणाम हो  । तर त्यसको ठीक उल्टो कम्युनिष्ट समाजवादभित्र सरकारले तो के को मूल्यमा सिधै उपभो क्ताले लिन पाउने हुन्छ ।
यहा“निर प्रश्न उठ्न सक्छ ने पाली कांगे ्रसको पनि त राष्ट्रियता प्रजातन्त्र र समाजवादको लो गो छ । राष्ट्रियता भने को दे शप्रतिको अपनत्व हो र त्यसको रक्षामा आफ्नो समर्पण हो  । प्रजातन्त्र भने को जनताका लागि जनताद्वारा जनताको शासन हुन्छ । समाजवाद भने को उत्पादित वस् तुहरु समन्यायिक आधारमा वितरण हुनु भन्ने धारणा हो  । ने पाली कांगे ्रसभित्रको राष्ट्रियता कति ओ जिलो छ । भारतले लगाएको नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी भन्न नसक्नु । प्रजातन्त्र कति गहकिलो छ । शो षक र शो षितको खाडल बढाइरहनु र राज्यको पहु“चमा शो षितलाई पुग्नै
नदिनु । समाजवाद भने को दलाल र पू“जीपतिहरु कमिशन र मुनाफामा र माइर हनु र श्रमजीवी जनताको ढाड सधै भा“चिर हनु । यदि यो हो इन भने नवउदार वादी अर्थतन्त्रका पृष्ठपो षक कांगे ्रसी अर्थमन्त्रीहरुले उद्यो ग भने को पू“जीपतिको हो  । र ाज्यसर कार को हो इन किन भन्थे  ? हिजो पञ्चायती कालमा मित्रर ाष्ट्रहरुले उपहार स् वरुप दिएका उद्यो गहरु निजीकर णका नाममा कांगे ्रसले बे चे र त्यहा“ काम गने र् मजदूर लाई विल्लीवा“ठ पार े को हो इन र ? बँ“सवार ी छाला जुत्ता कार खानालगायत ३८ वटा कार खाना कसले बे च्यो ? कांगे ्रसले हो इन र ? कार खानाहरुमा नातागो ता र कार्यकर्ता भर्ती गदै र् उद्यो गहरु रुग्ण बनाई दलालहरुको हातमा बे च्ने मे सो मिलाएको हो इन र ?
कांग्रे सहरुले र ाष्ट्रिय उद्यो ग किन बे चे ? यहा“ हुने उत्पादनलाई र ो की वस् तु आयात गर ी कमिसन लिने दे शलाई पर निर्भर तामा धके ल्ने र दलाल पू“जीपतिहरुको वृद्धि र संर क्षण गर्नलाई बे चे  । मुलुकभित्र गरि बी बढाएर युवाहरुलाई वे र ो जगार बनाउन बे चे  । तिनै वे र ो जगार युवालाई ५० डिग्रीको तातो मा खाडीमा पठाएर र े मिटे न्समा बा“च्ने दे श बनाउन बे चे  । भूकम्पले थिल्थिलो भएको दे शमा काम गने र् हातहरु छै नन् । कांगे ्रसलाई थाहा छ कि छै न ? आज ती र ाष्ट्रिय उद्यो गहरुमा काम गने र् मजदूर हरुले के गरि र हे का छन् ? के खाइर हे का छन् ? तिनका बालबच्चाले पढ्न पाए पाएनन् ? बाआमाले औ षधिमूलो पाए पाएनन ? कांग्रे सको समाजवादले कहिल्यै यो खो जे को छ ? समाजवाद भने को के हो ? कांगे ्रसले एकपटक यसको व्याख्या गर ो स् । जहा“सम्म कांग्रे सले ने पाली कम्युनिष्टहरुमाथि लगाउने आर ो प छन् त्यसको चिर फार हुनु पनि त्यत्तिकै जरुर ी छ ।
सम्पूर्ण मतदाताहरुले एक पटक निधार खुम्च्याएर सो चौ ं । कम्युुनिष्टहरु गठबन्धन बनँएर दे शको समृद्धिको खाका को र ी निर्वाचनमा आएका छन् । समृद्ध र ाष्ट्र बनाउनका लागि बलियो सर कार को आवश्यकता छ । कांग्रे सको बहुमतको शासन पटक–पटक भो ग्यौ ं । र ाष्ट्रियतामाथि बलात्कार हु“दा पनि चुप्पी साध्ने हरुलाई शासनमा टिकाइर ाख्नु हु“दै न । बे लै मा सो चौ ं ।
Previous: समृद्धिका लागि वाम गठबन्धन जरुर ी
Next: प्रतिस्पर्धाबाट राजनीति र सहमतिबाट विकास